जटिल बन्दै रानीपोखरी विवादः विज्ञका बीचमै अन्यौलता !
रानीपोखरी पुनर्निर्माणको थालनी कहिले ?
| 2018-09-13 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | भूकम्प गएको साढे ३ वर्ष वितिसक्दा सम्म रानीपोखरी पुनर्निर्माण अझै विवादमै अल्झिरहेको छ । विवाद टुंगाएर तत्काल पुर्निर्माण थालिने पर्नेमा सो सम्स्या झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
यसअघि पुरात्त्व विभागले रानीपोखरी बालगोपालेश्वर मन्दिर विज्ञको सुभावविपरीत पुनर्निर्माण थालेपछि उत्पन्न भएको विवाद जटिल बन्दै गएको हो ।
सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले उक्त मन्दिर प्रताप मल्लकालीन गुम्बज शैलीमै बनाउने पर्ने भन्दै दबाब दिएपछि काम नै रोकिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरात्त्व विभाग, विज्ञ, अभियान्ता लगायतबीच पटक–पटक छलफल गरेता पनि सो विषयको विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन ।
विज्ञहरुबीच फरक–फरक धारणा आएपछि झनै विवाद सृजना भएको छ । प्राधिकरणले गरेको छलफलमा केही विज्ञले रानीपोखरी पुनर्निर्माणलाई पहिलेकै शैलीमा बनाउनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले मल्लकालीन शैलीमा बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
विज्ञ समितिका सदस्य प्रध्यापक सुर्दशनराज तिवारीले रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गैरजिम्मेवार रुपमा रोकिएको बताए ।
समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार काम भएकाले पुरात्त्व विभागको स्टान्डर्डअनुसार बनाएको भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ ।
यता इतिहासविद् रमेश ढुंगेलले भने रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लको शैलीमा बनाइने हो भने उपत्यकका बाँकी सबै सम्पदा समेत पुरानै शैलीमा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
यसरी विज्ञहरुको बीचमा नै सहमती नजुटेपछि रानीपोखरी कुन शैलीमा बनाउने भन्ने निष्कर्श अझै निस्कन सकेको छैन ।
साथै यो विवाद टुंगिएर रानीपोखरी पुनर्निर्माणको थालनी कहिले हुन्छ भन्नेमा स्वयम् विज्ञहरु नै अन्यौलमा छन् ।
बिहीबार, २८ भदौ २०७५